Ngabe uBernie Sanders angamhalisela insangu ngokusemthethweni?
Ingabe uBernie angakwenza kube ngokomthetho ku-Day XNUMX?
Zibhalise ngokusemthethweni i-cannabis nge-Executive Order
Ngabe uBernie Sanders uzomhalisa ngokusemthethweni insangu ngosuku lokuqala? Yilalele kuPodCast noma ubuke i-YouTube UBernie Sanders Ngokwezezimali wenza insangu ngokusemthethweni yi-Executive Order ngosuku lokuqala. Thola ukuthi angakwenza yini ngempela - uma nje ehlula uDonald Trump okhethweni lwango-2020 - futhi futhi eshaya bonke abakholelwa kuDemokhrasi okungenani njengoba enza ku-Iowa edlubhe ikhosi.
Okuningi Ngama-oda Omkhandlu.
Iposi elihlobene: Imininingwane Yezephulelo - Chofoza Lapha.
"UBernie Sanders uthi ufuna ukumisa u-1% ongakuthandi ukwenziwa ngokusemthethweni kwe-cannabis futhi awunikeze u-98% owenzayo. Futhi akukho mabhidigidi angamyekisa ukuvimbela insangu ngokusemthethweni.
Sawubona, nginguTom futhi ungangithola ngommeli we-cannabis we-cannabis bese uchofoza kwiwebhusayithi yami engummeli webhizinisi le-cannabis - isisetshenziswa sokufunda kabanzi ngalo mkhakha - okusiletha ku-Can Bernie Sanders nje umemezele i-cannabis esemthethweni ngesikhulu esiphezulu isenzo?
Isigaba 2 soMthethosisekelo sivumela izinyathelo eziphezulu zokuphoqelela umthetho. UDonald Trump ucabanga ukuthi i-Article 2 imvumela ukuthi enze noma yini ayifunayo - kanti necala lokufaka isiteleka eSenate libonakala likuqinisekisa lokho. Ngabe umbhalo 2 uthini ngqo - hhayi okuningi: uyothatha ukunakekela ukuthi iMithetho mayenziwe ngokuthembeka. Isigaba 2 Isigaba 3.
Yini i-oda elidumile elidumile? I-1863's Emancipation Proclamation - okusho ukuthi u-Abe Lincoln kumele ukuthi wayecabanga ukuthi ubugqila abunamthetho - naphezu kokuchibiyelwa kwe-13 kungenzeki kuze kube ngu-1865.
Abazange baqale ukubizwa ngokuthi ama-Executive Orders kuze kube ngonyaka we-1907. Ngo-1952 - uMongameli Truman wafaka zonke izinsimbi ngaphansi kokuphatha - ngakho-ke ama-sanderners ama-bernie angenza into ethize engaphansi kobuhlobo bezenhlalo futhi enze ngokusemthethweni ama-cannabis ngomyalo omkhulu?
Uyini umkhawulo wePresident Executive Order Powers?
Isenzo sikaTransans sasisekude kakhulu - bekuzama ukwenza umthetho esikhundleni sokucacisa isenzo. Umthetho olawulwa yiZimo eziLawuliwe empeleni ukhokhisa uMmeli Jikelele ukuthi ahlehle kabusha izinto ngenqubo yezokuphatha - okusho ukuthi igatsha eliphezulu lingakuguqula ukuhlela - kepha bangakwazi ukweqa inqubo?
Kuthiwani uma uBernie ekholelwa lokho ebengikusho njalo nokuthi ukwenqatshelwa kwensangu kungumthetho ongakhethiyo wobandlululo ongahlukani nesisekelo sokuhlolwa kokulanywa komthethosisekelo? Ngabe isenzo sakhe bekungaba yilowo msebenzi wokugcina wokuxhasa umthethosisekelo kuleyo nqubo yokukhetha eyenziwe yiCongress ngo-1970?
Kuthiwani uma lokho kudlulela phambili - kahle, iCongress ingathatha isinyathelo sokubuyisa imali yayo - kepha ngokususa i-cannabis ku-CSA - kahle, lokho akukubizi ngalutho ukukuphoqelela. Ngakho-ke kufanele bamangalele. Mhlawumbe izwe lesikwele ngempela - njengo-Idaho noma u-Indiana angamangalela i-US. Lokho kungathatha isikhathi ukusebenza.
Ngakho-ke uma uBernie ekholelwa ukuthi ukuhleleka kwamanje kweMarijuana akuyona into engahambisani noMthethosisekelo futhi ukungafani kwayo ngokobuhlanga ekuphoqeleleni kanye nemvelaphi yomthetho kusekela ukukholelwa kwakhe - uqinisekile ukuthi angakwenza.
Kepha angakuyekela lokho futhi aqondise ukuphatha kwakhe ukuthi lingasebenzisi imithetho yensangu kuphela ngoba inkinga enkulu iyaphakama lapho abaphathi besebenzisa kabi amandla abo ngokwenza imithetho ngaphandle kwemvume yenhlangano futhi behamba bemuka nemiyalelo ekhona.
Kungani uBernie Sanders EngaMisa ngokusemthethweni I-Marijuana Ngu-Executive Order
Ngaleso sikhathi - angavele akwenze vele - kepha kungahle kungaphoqeleleki ngemuva kwenselelo yezomthetho.
Mhlawumbe ukufakwa komyalo wenkampani ephezulu kungadlala indima - ngokwesibonelo ukuqondisa ukuphatha kwakhe ukuthi kungaphoqeleli imithetho yensangu esikhundleni sokwenza izichibiyelo zomthetho futhi empeleni kuyisuse ku-CSA.
Impela kungaba nokuphikisana - Njengalapho kwathi ngo-1940 sabopha amaMelika aseJapan sababeka emakamu.
Or lapho thina Eisenhower sikhutshiwe izikole zomphakathi. Lawo ma-oda ayenempikiswano ngaleso sikhathi - kepha awaphikiswa.
I-cannabis Legalization ithandwa kakhulu - ithandwa kakhulu ukuthi ngikubheja okuthandwa nguwe bese ubhalisela izindaba ze-cannabis Legalization. NgoLwesithathu ngo 2:00 pm.
Ngakho-ke lapho unayo - uBernie angabhala ngokuphelele i-oda lesikhulu
Ungangilahli - kwakuyiphutha le-inthanethi:
UBernie Uthembisa Ukuthola Insangu Ngokomthetho Ngosuku Lokuqala- Ingabe Angakwenza?
Ngu: David Silvers
Ngobusuku base-Iowa Caucuses, uSenator Bernie Sander (I-VT) ethembisiwe ukuvala insangu ngokusemthethweni kuzo zonke izifundazwe ezingama-50 ngosuku lokuqala ehhovisi, “ngomyalo omkhulu.” USanders uthembise nokuthi uzocisha amarekhodi abantu ababoshelwe ukutholakala, mhlawumbe agqugquzelwe yisinyathelo esifanayo esivela ku-Governor Pritzker wase Illinois.
Njengazo zonke izithembiso zomkhankaso, kunezingqinamba ezithile ezingokomthetho nezisebenzayo. Umthetho olawulwayo wezinto ezilawulayo, ovimbela insangu esezingeni lobumbano. Kube khona a umlando omude yemizamo ehlulekile yokufaka kabusha i-cannabis ngaphansi kwe-CSA. I-CSA futhi kuvumela Ummeli Jikelele ukuze ahlehlise kabusha insangu ngenqubo yokuphatha, ngaleyo ndlela edlula kuCongress. Kodwa-ke, inqubo yokubusa yinde futhi i-bureaucratic, futhi ngokuqinisekile akuyona into amaSanders noma omunye umuntu angayithola ngoSuku Lokuqala. Ungalokothi, ngeqiniso, ukuthi amaSanders mhlawumbe ngeke abe nommeli wakhe Omkhulu aqinisekise ukuthi ngelinye ilanga.
Kunokunye okungenzeka. Ngo-2013, iPhini Lommeli Omkhulu, u-James Cole, osebenzela ekuphathweni kwe-Obama, wakhipha uhlu lwezikhalazo ze- “Guidance About Marijuana Enforcing”, olwaziwa kakhulu njenge- Imemorandamu yeCole. ICole Memo empeleni ibeke umgomo eMnyangweni Wezobulungiswa wokuphoqelela ukuphoqelelwa kwe-CSA ezifundazweni ezazivumele insangu ngokusemthethweni. Ngo-2018, lowo wabe eseMmeli-Jikelele, uJeff Smit, wasusa iCole Memo futhi washiya nokuphoqelelwa kwe-CSA ngokubona kwabashushisi bendawo. Imemo ye-Attorney General Septs yayiyikhasi elilodwa ubude, okukhombisa ukuthi ingashintsha kalula kangakanani inqubomgomo yezombuso.
Singathola futhi ukuqonda okuthile endaweni ehlukile yomthetho, okungukuthi abafuduki. I-Obama Administration isungule izinqubomgomo ezimbili ezahlukile zokufudukela kwelinye izwe, i-DAPA (Defended Action for Parents of Americanans) kanye ne-DACA (Defended Action for Childhood Arrivals). I-DAPA ne-DACA yakhelwe kumqondo we Ukuqonda Komshushisi, noma umbono wokuthi abasebenza ngomthetho banokuthatha isinqumo sokunquma ukuthi basebenzise nini umthetho ngokususelwe ekucabangeni okufana nezinkinga zezinsizakusebenza kanye nobukhulu bokwephulwa komthetho. Ngokokukhuluma kabanzi, i-DAPA ne-DACA ziyizinhlelo lapho uhulumeni enqaba khona ukuphoqelela imithetho ethile yokufudukela kwezinye izigaba ezibanzi zabantu.
I-DAPA iphonswe inselelo yonke indlela eya eNkantolo Ephakeme ecaleni le-2015 I-Texas v. United States, lapho ukuhlukaniswa kweNkantolo kwe-4-4 kwashiya uhlelo lukhona. Inkantolo Ephakeme isanda kulalela inselelo kwi-DACA UMnyango Wezokuphepha Kwasekhaya v. Regents of the University of California, ngesinqumo ebesilindelwe ngoJuni 2020. Ngenkathi leli kuyicala lokufuduka, lingasitshela okuningi mayelana nokuthi uhulumeni wobumbano, noma kulokhu uMengameli uSanders angavuma ukuthi enze yonke ingxenye yemithetho yenhlangano.
Futhi kuthiwani ngecebo likaBernie lokuthethelela inani elikhulu labantu abatholakala benecala lokutholakala nensangu? Lokho kubonakala kuwumbuzo oqonde phambili. Amandla kaMongameli wokuxolelwa ahlanganiswa ku-Article II, Isigaba 2, Isigaba 1 soMthethosisekelo wase-US. Kuhlinzeka nje ukuthi "[yena] uMongameli ... uzoba namandla okuvumela ukuRhoxiswa kanye nokuxolelwa Okwenziwayo Kwezimali ne-United States, ngaphandle kwezimo zokubandakanyeka." Ngenkathi amandla kaMongameli wokuxolelwa akhawulelwe emacaleni e-federal (futhi ngenxa yalokho angeke asebenze ezinkolelweni zikahulumeni zensangu), ngenye indlela kwamukeleka ngokubanzi ukuthi ayikho eminye imikhawulo enengqondo emandleni kaMongameli wokuxolelwa.
Vele, lokhu konke kungahle kube kwemqondo ngokuphelele-asazi ukuthi kuzoba noMongameli uBernie, noma uDkt Nominee Bernie. Kepha njengendaba engokoqobo nengokomthetho? Igunya libonakala lisikisela lokho Yebo Angakwazi!